The Ab Presents Nepal » देशले छलाङ्ग मार्न्यो १८६ देशलाई उछिनेर नेपाल बन्यो ‘टप इम्प्रुभर ’वाह ! ओली सरकार, कामबाटै दियो जवाफ
देशले छलाङ्ग मार्न्यो १८६ देशलाई उछिनेर नेपाल बन्यो ‘टप इम्प्रुभर ’वाह ! ओली सरकार, कामबाटै दियो जवाफ
काठमाडौं, साउन २५ -: पाँच वर्षको स्थिर सरकार बनेपछि विपक्षीहरुको तारो बनेको सरकारले पछिल्लो समय कामबाटै त्यसको जवाफ दिन थालेको छ । सरकारले खै के गर्यो भन्दै अफवाह फैलाउनेलाई सरकारले पछिल्लो पटक एक गतिलो जवाफ दिएको छ ।
यसैगरी सुधार भएका देशहरुमा मालदिभ्स दोस्रो तथा इथियोपिया तेस्रो भएको छ। आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक तथा संरचनागत जोखिमको सूचकको अध्ययनका आधारमा उत्कृष्ट देशभित्र परेका हुन्। सर्वेक्षणलाई राजनीतिक आर्थिक तथा संरचनागत जोखिमका बिभिन्न १५ वटा सूचकहरुका आधारमा अध्ययन गरिएको थियो। नेपालले ति सबै सूचकहरुमा सुधार गरेको छ’।
सन् २०१७ को चुनावपछि देशले राजनीतिक स्थिरता पाएको तथा सरकारमा स्थायित्व आएकोलाई सर्वेक्षणले सकारात्मक तथा सबैभन्दा बढी सुधारको पक्ष मानेको छ। नेपालको गत केही वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वास्तविक जिडीपीमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ’।
सन् २०१७–१८ मा ६.३ प्रतिशत तथा सन् २०१६–१७ मा ७.९ प्रतिशत बृद्धि भएको देखिएको छ। नेपालमा केही समय यता पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीहरु भैरहेको छ। चीन र भारतले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गरिरहेको तथा अझै लगानीको अवसर खोजिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।’